Ku dhawaad ​​kasta smart phone user ayaa wajahaya arimaha la xiriira xawaaraha-yaraan hal mar lixdii biloodba mar. Qaar ka mid ah telefoonada smart noqday mid gaabis ah, halka qaar ka mid ah ka bilaabi baraf. Bal aan eegno saddex ka mid ah sababaha ugu badan ee hoos u dhigi karo macruufka ama Android phone.
1> meel lagu kaydiyo aad u yar
Haddii aad xaqiiqsato in aad telefoon si tartiib ah u shaqeeya, talaabada ugu horeysa waa in aad qaado waa hubinta qadarka xasuusta gudaha iyo meel harsan kaarka SD. Dhowr barnaamijyadooda hoos markasta oo xasuusta telefoonka ee uu gaaro xadka qaarkood. Hubi in ugu yaraan boqolkiiba 30 ka mid ah xasuusta guud waa lacag la'aan, diyaar u ah isticmaalka.
2> codsiyada Joogto socda
Waxaa jira dhowr ah codsiyada in sii socda ee asalka ah ma yihiin xitaa marka la isticmaalo aad. Chine Kuwani abuuro badan oo khasnado, oo ay isticmaalaan qayb badan ee xasuusta telefoonka ee. In-si ay u ogaato in aad telefoon u shaqaynayo gaabis ah ay sabab u tahay barnaamijyadooda si joogto ah iyagoo ordaya, waa in aad la bilaabi telefoonka, ka dibna ay tagaan goobaha> codsiyada> codsiyada socda si aad u hubiso iyo xaqiijin ku saabsan tirada codsiyada socda.
3> xiriir internet oo gaabis ah
Tani waxay u muuqan yaabaa in cajiib ah, laakiin xitaa internet gaabis ah, ama xidhiidh Wi-Fi kartaan Yaasiin aad telefoon ama kiniin PC. Sidaas, calaamadee dhammaan barnaamijyadooda maamulka, hubi helitaanka xasuusta, iyo hubiyo xawaaraha internet sidoo.
Siyaabaha la isu wanaajiyo kartida telefoonka iyo xawaaraha guud
Delete barnaamijyadooda la rabin
Takhalusid barnaamijyadooda aan loo baahnayn iyadoo la kaashanayo software tirtirka codsiga kaa caawin kartaa inaad meel ku filan oo Chine cusub, iyo in ay sidoo kale dardar-up doona telefoonka.
Beddel network taleefanka gacanta aad
Haddii aad ogaaday in uu jiro qaar ka mid ah dhibaatada ku network telefoonka aad, ama isku xirnaanta Internet-ka waa u gaabiyaa ay sabab u tahay caymiska shabakad masaakiinta ah, waa in aad bedesho network taleefanka gacanta aad. Xagliyaan wadaha kaas oo bixiya caymis wanaagsan agagaarka xafiiska guriga iyo goobta.
Ku rakib Chine in nadiifin kartaa telefoonka s
Ku rakib codsiyada in tirtiri kartaa files khasnado, files junk rabin, barnaamijyadooda la rabin, oo ay joojiyaan barnaamijyadooda asalka ka socda.
Samee isbeddel ah ee aad router wanaagsan signal Wi-Fi
Xawaaraha Wi-Fi saamayn ku yeelan karaan qaab aad telefoonka ee la taaban karo. Tijaabi xawaaraha internet oo la gaarey aad router, ka dibna, hubi xawaaraha inaad helayso qaybo kala duwan oo aad guriga.
Waxaa lagu talinayaa in la hagaajin aad router ee xarunta guriga si ay signal gaari lahaa oo dhan geesood oo meesha. Haddii ay sabab u tahay sababaha qaar ka mid ah aadan awoodin inaad iska baddasho goobta router ee, waa in aad ka fikirto iibsan anteeno dibadda si ay u hubiyaan in aad smart phone PC / kiniin helo signal badan, qaybo kala duwan oo ka mid ah gurigaaga ama xafiiska.
Wondershare MobileGo dardar-up kara arrimo aad iyo qalab Android in hal click
Baahida loo qabo saacadduu waa barnaamij software in abaabuli karaan content phone smart ee, lagu ogaan files aan loo baahnayn, lagu ogaan codsiyada in haystaan ​​badan oo meel, iyo caawin in la tirtiro xogta la rabin ilbiriqsi gudahood ah.
Wondershare MobileGo bixiyaa oo kaliya in! Baaritaano codsiga, ogaadaa files aan loo baahnayn oo saamaxaya kuwa isticmaala in ay tirtirto files kuwa hal click. Tani waxay si toos ah u kordhiyaa xawaare aad telefoonka ee. Tan ugu muhiimsan, MobileGo ku xidhi kartaa telefoonka smart iyo PC kiniin la desktop computer aad. Ka sokow abuuro dib-up for xogta aad qalab ayaa on your computer, waxa ay sidoo kale tirtiri kartaa xogta / masixi ka qalab aad sida uu qabo heerka military.
Isticmaal MobileGo Wondershare in ay dardar-up qalabka macruufka aad
Tallaabada ugu horreysa waa in codsiga MobileGo on your computer.
Markaas, xiriiriyaan qalab macruufka ah in kombiyuutarka la cable USB. Nooca qalabka Dooro sida macruufka.
Software ayaa lagu ogaan lahaa qalab aad iyo muujiyaan faahfaahin ay ku interface ka. Waxay muujin doonaa oo dhan content ka qalab qaybaha. Wondershare MobileGo uu sameeyey wax Lugood ma sheegi karo. Si aad u nadiifiso aad telefoon iyo in laga takhaluso files junk rabin, dooro ikhtiyaarka xirmada qalabka super ka menu, oo guji baado bannaan.
Wondershare MobileGo ee baado meel khiyaar qalabka macruufka kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan iyo tirto faylasha junk. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad cadaadin, oo la yareeyo xajmiga images qabsadeen qalab aad aan raad ku tayada.
Baado Space uu sidoo kale ogaadaa in yar codsiyada la isticmaalay, iyo muujinaysaa liiska on user interface. Waxaad tirtiri kartaa Chine, kuwaas oo mid ka mid kaliya click.
Ka sokow taas, codsiga waxay bixisaa maamulka iyo xogta astaamaha in loo bixiyo sida Lugood wareejinta ku dhowaad dhammaan xogta kale.
Isticmaal Wondershare app MobileGo in ay dardar-up telefoonka aad Android
Tallaabada ugu horreysa waa in codsiga MobileGo qalabka android aad.
Riix MobileGo icon iyo furi codsiga.
MobileGo si deg deg ah iskaan doonaa faahfaahinta qalab iyo share ku saabsan boqolkiiba isticmaalka RAM, iyo fursadaha ay heli karaan dardar-up qalab aad.
Riix nadiifsan telefoonka, iyo software ka muujin doonaa macluumaad ku saabsan oo dhan files rabin suurto gal ah in aad tirtiri kartaa si loo hagaajiyo qaab qalab ee.
Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa guji nadiif ah in laga takhaluso dhammaan faylasha la rabin.
App ayaa sidoo kale waxay bixisaa macluumaad ku saabsan codsiyada la isticmaalin ka qalab aad in aad ka fekeri karo tirtiro si ay u meel dheeraad ah qaar ka mid ah.
Doorashada app boost bixisaa si aad u nadiifiso faylasha qaar ka Chine oo waxaan ka dhigi qabtaan si dhakhso ah oo fiican.
> Resource > Android > Sida loo dardar Your Phone